बेलको भविष्य कता ? | Hamro Khelkud
बेलको भविष्य कता ?
सोमबार, चैत २५, २०७५
एजेन्सी – पछिल्लो समय रियल म्याड्रिडमा बेलको भविष्यलाई लिएर धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको छैन । उनले अर्को सिजन क्लब छाड्ने लगभग पक्का देखिन्छ । अब प्रश्न छ त उनलाई कुन क्लबले अनुबन्धन गर्ने प्रस्ताव राख्छ भन्नेमा ।
शनिबारको खेलमा रियलले एइबारलाई २-१ ले पराजित गर्दा घरेलु समर्थकले बेलको प्रदर्शनलाई गिज्याएका थिए । अघिल्लो वर्ष मात्र च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उपाधि जित्दाका नायक बनेका बेल अहिले रियलमा समर्थकमाझ प्रिय छैनन् । उनले लगातार राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा समर्थकहरु निराश बनेका छन् । यसै सिजन जिदानअघिका दुवै प्रशिक्षकसँग बेलले राम्रो छाप बसाउन सकेनन् ।
जिदानको पुनरागमन बेलको लागि रियलमा पुन: पुरानै छाप बसाउने एक मौका बन्ने अपेक्षा थियो । तर केहि साता बितिसक्दा पनि त्यसो हुन सकेको छैन । बेल सिजनको अन्त्यमा रियल छाड्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । यद्यपी बेललाई अनुबन्धन गर्ने हैसियत कमै क्लबको छ । उनको ट्रान्सफर रकम पनि ठूलो हुने कारण कमै क्लबले उनलाई भित्र्याउने प्रस्ताव राख्नेछन् ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडले नयाँ प्रशिक्षकको आगमनसँगै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । क्लबले सन् २०१२/१३ सिजनपछि लिग उपाधि जित्न सकेको छैन । यस उपाधि खडेरी तोड्न बेल राम्रो विकल्प बन्न सक्छन । युनाइटेडले यसअघि पनि उनलाई अनुबन्धन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
बायर्न म्युनिख पनि बेलको लागि उचित विकल्प हुन सक्छ । च्याम्पियन्स लिगमा राम्रो प्रदर्शन गर्न असफल बायर्नमा आर्जेन रोबेन र फ्रान्क रिबरी जस्ता भेट्रान खेलाडी क्लब छाड्ने तयारीमा छन् । यस्तो अवस्थामा बेलले बायर्नमा आफ्नो छाप बसाउन सक्छन ।
टोटेनहम हट्सपर पनि बेलको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ । बेलले छाडेर गएपछि टोटेनहममा निकै परिवर्तन आएको छ । अघिल्लो साता मात्र क्लबले नयाँ रंगशाला पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब मोटो रकम खर्चने सुरमा रहेको स्पर्सका लागि बेल उचित विकल्प हुन सक्छन ।